ဇော်ဇော်ထွန်း ● လောရင့်ဖာလင်ဂတ်တီရဲ့ အတွင်းခံ | MoeMaKa Burmese News & Media
ပိုင်သစ်နွယ် - မှီခို
ဆောင်းယွန်းလ ● အစိုးမရခြင်းများ
ဆောင်းယွန်းလ - “မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဟုတ်တာက..ဘာပါလိမ့်”
ေ အာ င်ဝေး- ပန်း နု ရောင် အို ဋီ ကာ ၊ ဒဂုန်တာရာ (၁၉၁၉ - ၂၀၁၃)
ဒေါက်တာသန်းထွန်း - ဆရာအိုရဲ့ဆုံးမစာ
မဝင့်(မြစ်ငယ်) - အနီကိုလွမ်းတယ်
မင်းနဒီခ ● ကွယ်လွန်သူတို့ တေးသွား
ဇော်ဇော်ထွန်း ● လောရင့်ဖာလင်ဂတ်တီရဲ့ အတွင်းခံ
အဲဒီ့အထဲ ခင်ဗျားလက်နှိုက်လို့ကတော့ တုန်လှုပ်ဖွယ်ပြသနာတချို့များလာတယ်
ဟိုတလောက တီဗီထဲ သူ့ကိုမြင်ရတာ
အတွင်းခံက ခင်ဗျားကိုတကယ်ကို ကသိကအောက်ဖြစ်စေနိုင်ပါရဲ့
အရမ်းတူ …ဒါပေသိ အတော်လေးထူးခြားသဗျ
မိန်းမဝတ်တွေက ပစ္စည်းတွေ တွန်းထိန်းထားတယ်
ယောက်ျားဝတ်တွေက ပစ္စည်းတွေကို ချုပ်ထားတယ်
အတွင်းခံဟာ ကျုပ်တို့ကြားက ရှိသမျှအရာရာ
အဲဒီစနစ်က ရွေးချယ်ခွင့် သဘောရှိခွင့်ပြုပေးမှာတော့မဟုတ်
နောက်ဆုံးတော့ အတွင်းခံက အရာရာကိုထိန်းချုပ်ပစ်တော့တာ
အဝတ်အစားတွေရဲ့အောက်ဆုံးအလွှာကို ကျုပ် ဥပမာပေးချင်ရဲ့
ခင်ဗျားလုပ်နိုင်တာ မလုပ်နိုင်တာကို ပြောတဲ့အမှန်တရား
လေဒီမာ့(ခ)ဘက်(သ)ရော ဝတ်ခဲ့သလား ?
မာ့(ခ)ဘက်(သ) အိပ်နေတုန်းအသတ်ခံရတာ အဲဒါကြောင့်လား?
တကယ်ပဲ သူမ အတွင်းခံထဲမှာရှိခဲ့သလား?
အမြဲလျှော်တယ် ဖွတ်တယ် လျှော်ဖွတ်တယ်
ကြိုတန်းပေါ်လှမ်းထားတဲ့ အတွင်းခံက လွတ်လပ်ရေးအလံကြီး
တနေရာမှာတော့ ဝစ်လစ်စလစ် …
အခုချိန်အထိ လူတိုင်းဟာ အတွင်းခံဝတ်လျက်ပါဗျ
ထူးဆန်းထွေလာအနည်ကျကျောက်တွေ နားလည်ရခက်တဲ့ အက်ကြောင်းလေးတွေ
အဲဒီသာယာလှပညချမ်းဆီ အဝတ် အဝတ်ဗလာကျင်းပြီးမသွားမိစေနဲ့ဗျို့
တည်ငြိမ် နွေးထွေး ခြောက်သွေ့ပါစေ
အလောတကြီး ကိုယ်ကိုကိုယ် ထိခိုက်ကြေကွဲစေတာက အဓိပ္ပာယ်မဲ့သဗျာ
ငါတို့တွေ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မဟုတ်တော့ဘူးကွာ
မူရင်း – လောရင့်ဖာလင်ဂေတီ ( Lawrence Ferlinghetti )
“Underwear” from “Staring from San Francisco”.
လောရင့်ကို ၁၉၁၉မှာ ယွန်ကာ (Yonkers) နယူးယော့မှာမွေးတယ်။ ငယ်ဘဝကို ပြင်သစ်မှာ ဖြတ်သန်းတယ်။ ဘီအေဘွဲ့ကိုတော့မြောက်ကာရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ် (University of North Carolina) ကရပြီး အမ်အေကိုတော့ ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ် (Columbia University) က ရတယ်။ ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုတော့ ဆောဘွန်း (Sorbonne) က ရခဲ့တယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ အမေရိကန်ရေတပ်ထဲကို အမှုဝင်ထမ်းတယ်။ နကာဆာကီ (Nagasaki) မြို့ဗုံးမကျခင် အချိန်ထိ အဲဒီမှာ သူရှိနေတယ်။ ၁၉၅၁ မှာ အိမ်ထောင်ကျပြီး သားတယောက် သမီးတယောက်ရတယ်။ ၁၉၅၃ မှာတော့ ဖာလင်ဟက်တီဟာ ပီတာမာတင် (Peter Martin) နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ”မြို့တော်အလင်း” (City Lights) မဂ္ဂဇင်းကို ထုတ်ဝေတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ မဂ္ဂဇင်းကိုပံ့ပိုးဖို့ ဆန်ဖရန်စ္စကိုမှာ (City Lights) စာအုပ်တိုက် ကို ထူထောင်တယ်။ နောက်တော့ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးတွေ ဆက်တိုက်လုပ်လာခဲ့တယ်။ Beat လှုပ်ရှားမှုအတွက်တော့သူတို့ စာအုပ်တိုက်ဟာ အသည်းနှလုံးပါပဲတဲ့။
ဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကက်နက်ရီးရော့ (Kenneth Rexroth)၊ ဂယ်ရီဆန်ဒါး (Gary Snyder)၊ အယ်လန်ဂျင်းဇဘတ် (Allen Ginsberg) နဲ့ ဂျက်ကာရိုးလေ့ (Jack Kerouace) စာအုပ်တွေကို ထုတ်ဝေပေး ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ကဗျာတွေဟာလားရစ် (Lyric) ဟန်နဲ့ ဇတ်ကြောင်းပြန်ပုံစံ (Narrative Tradition) ကို အခြေခံတယ်လို့ဝေဖန်သူများကဆိုတယ်။ သဘာဝတရားရဲ့အလှ (Beauty of Natural World) ၊ ဘဝရဲ့အမော(Tragicomic Life)၊ အခြေခံလူတန်းစားရဲ့ဘဝ(Life of common man)၊ အိပ်မက်(ဝါ) စိတ်ကူး(The Dream) နဲ့ ဒီမိုကရေစီအပေါ်သစ္စာဖောက်ခြင်း (သို့) အယုံအကြည်မဲ့ခြင်း (Betrayal of Democracy) ကိုကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုတယ်။ သူဟာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို ”မမျှတခြင်း” လို့ခံယူသူလည်းဖြစ်ရဲ့။ တချို့ ကဗျာတွေမှာ အဲဒီလူတန်းစားကွာဟချက်ကို လှောင်ပြောင်သရော်တယ်။ သူ့ရဲ့အထင်ရှားဆုံး သာဓကကတော့ ”ထရပ်ကား ပေါ်က အမှိုက်ကောက်သမားနှစ်ယောက်နဲ့ မာစီးဒီးထဲကလှပတဲ့ လူနှစ်ယောက်” (Two Scavengers inaTruck, Two Beautiful People inaMercedes) ဟာ ထင်ရှားတယ်။ တချို့ကတော့ ဒီကဗျာက သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုတယ်။ အဲဒီကဗျာကိုအင်္ဂလန်မှာ GCSE(A)LEVEL သင်ရိုးအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ခွေး (Dog) နဲ့စောင့်နေပါသည် (I am waiting) ကို ပိုပြီး ကြိုက်တယ်။ နောက်ပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီ(Underwear)ကို ဖတ်ရတော့ သူ့ရဲ့အတွေး ဟာ ဖောက်ထွက်တွေးတဲ့ အတွေး (သို့) ရှုထောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတစုံတယောက်နဲ့ လောင်းကြေး ထပ်ရဲတဲ့အထိ ခိုင်မာလာခဲ့ တယ်။ ကျွန်တော့်အဘိုးသာ အသက်ရှင်လျက်ရှိရင်လောရင့်ရဲ့ အရွယ်ကိုရောက်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကဗျာ တည်ဆောက်ပုံနဲ့ အတွေးကတော့ အမြဲလတ်ဆတ် မှန်ကန်နေတုန်းပါပဲ။ သူ့ရေးဟန်ဟာ မြန်မာကဗျာဆရာတွေနဲ့ အတော်လေးကို နီးနီး စပ်စပ် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖတ်ချင်၊ ဘာသာပြန်ချင်နေတဲ့ကဗျာတွေဟာ လောရင့်ရဲ့ကဗျာတွေပါပဲ။ သူ့အပေါ် ဘယ်သူတွေများလွှမ်းမိုးခဲ့ပါလိမ့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို အဖြေရှာကြည့်တော့ ကဗျာဆရာ တချို့ကိုသွားတွေ့တယ်။ သူကြိုက် ခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာတွေကတော့ အဲလီယော့ (T.S Eliot)၊ အက်ဇရာပေါင်း(Ezra Pound)၊ အီးအီးကမ်းမင်း (e.e. Cummings)၊ အိပ်ခ်ျဒီ (H.D)၊ မာဆာပရောက်(Marcel Proust)၊ ချာလီဘော်ဒီလာရီ (Charles Baudelaire)၊ အပိုလီနယ်လီ (Gvillaume Apollinaire)တို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ ဆန်ဖရန်စ္စကိုကလမ်းတလမ်းကို လောရင့် နာမည်ပေးပြီးဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်။ ဒါဟာ အဲဒီမြို့မှာ ကဗျာဆရာအမည်နဲ့ပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့ လမ်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့ မုတ်ဆိတ်မွေး၊ စူးရှတဲ့မျက်လုံးနဲ့ ဦးထုပ် ခပ်ဝိုင်းဝိုင်းတလုံးကို ခပ်ငိုက်ငိုက်ဆောင်းတတ်တဲ့ လောရင့်ကိုတွေ့ရင်”သက်တော်ရာကျော်ရှည်ဖို့ ဘုရားသခင် စောင်မပါစေ” လို့ ကျွန်တော့်ကိုယ်စား ခင်ဗျားတို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါ။ လောရင့်ရဲ့နာမည်မပါပဲ (Beat Generation) ကိုစာလုံးပေါင်းဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ယခုလောလောဆယ်တော့ သူက စာအုပ်ဆိုင်ကို လည်ပတ်အောင်လုပ်ပြီး ကဗျာကွန်ဖရင့်အတွက် မကြာခဏခရီးထွက်လေ့ရှိတယ်တဲ့။ ဆန်ဖရန်စ္စကို ခရော်နီကယ်သတင်းစာအတွက် ပင်တိုင် ရေး ပေးနေတယ်လို့လဲ သိရတယ်။
– ကွယ်ပျောက်သွားသောကမ္ဘာမြေ၏ပုံရိပ်များ (Picture of the Gone World)
– စိတ်ကူးထဲက ယုန်ကျွန်းတကျွန်း (A Coney Island of the Mind) –
– သူမ၏ (Her) (1960) –
– ဆန်ဖရန်စ္စကိုမှအစပြု၍ (Starting from San Francisco) (1961)
– တရားမျှတမှုကင်းသော ငြင်းခုန်မှုများနှင့် ဖြစ်တည်မှု (Unfair Arguments with Existence) (1963)
– နေ့တဓူဝကိစ္စ (Routines) (1964) –
– အရာဝတ္ထုများ၏ လျှို့ဝှက်အဓိပ္ပါယ် (The Secret Meaning of Things) (1969)
– တိုင်ရန်နပ်ငှက်မဟုတ်? (Tyrannus Nix?) (1969) –
– မက္ကဆီကန်ည (The Mexican Night) (1969) –
– ဝေးလံဒေသများသို့ နောက်ပြန်ခရီးများ (Back Roads to Far Places) (1971) –
– ဖွင့်ထားသောအမြင်၊ ဖွင့်ထားသော စိတ် (Open Eye, Open Heart) (1973) တို့ပဲ ဖြစ်တယ်။
Tags: ဆန်ဖရန်, ဇော်ဇော်ထွန်း
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ကဗျာ, ဘာသာပြန်ကဏ္ဍ